Dowlada Nijeria oo lagu eedeeyay in ay dishay Dad Rayid ah. – SBC
Dowlada Nijeria oo lagu eedeeyay in ay dishay Dad Rayid ah.
Howl gal ay Ciidamada Nijeria ka sameeyeen Gobolada Waqooyi ee dalkaasi ayaa keentay in lagu tuhmo Ciidamada wadankaas in ay dileen tobanaan rayid ah oo ka tirsan dadka deegaankaasi.
Ciidamada Nijeria waxaa ay goorsii horaysay sheegeen in ay ku Dileen 11 kamid ah Kooxaha Boko Haram weerar ay ku qaadeen deegaan ku yaala Waqooyiga Dalkaasi.
Bayaan kasoo baxay taliska Ciidanka Nijeria ayaa gabal dhicii shalay lagu sheegay in is rasaasayn xoogan oo ciidamadooda iyo Kuwa Boko Haram ku dhex martay Magaalada Maydaguuri ee Waqooyi Bari Nijeria ay keentay in dad rayid ah howl galkaasi ay ku dhinteen Walo ay sheegeen in ay ahayd tiro yar.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay jirto tiro dad ah oo ciidamada Nijeria ay beegsadeen,iyadoona dhismayaal iyo Baabuur ay ku burbureen dagaalkii Mayduguuri.
Wakaala Wararka Faransiiska AfP ayaa sheegtay in Ciidamo caraysan oo ka tirsan Ciidamada Nijeria ay galeen dhismayaal ku yaala deegaanka Kaalaraay,iyadoona halkaasi ay ku gobeen dhismayaal ay dad rayid ah ku jireen.
Weerarada lagu tuhmayo Ciidamada Nijeria in ay dadka rayidka ah ku waxyeelaynayaan ayaa yimi kadib markii ay dowladu sheegtay in dhamaan qaraxyadii dalkaasi ka dhacay asbuucyadii aynu soo dhaafnay ay ka dambeyeen Kooxada Islaamiga ah ee Boko Haram.